“ ❤ ဤဘလော့ရဲ့ Post များကို အမြဲ Update ပြုလုပ်ပေးလျှက်ရှိပါသည် ❤ ”
flag Songs စုစည်းမှု
✿ အဆုံးမဲ့ အမုန်း ✿
✿ အထီးကျန်ဆန်လွန်းတဲ့ ဒီဘ၀ကို
""""" မုန်းတယ် """""
✿ စာနာ နားလည်မယ့်သူမရှိတဲ့ ဒီဘ၀ကို
✿ လွန်ဆန်မရတဲ့ တာဝန်ဝတ္တရားတွေနဲ့ ဒီဘ၀ကို
✿ ဖြစ်ချင်တာထက် ဖြစ်သင့်တာကို ဦးစားပေးနေရတဲ့ ဒီဘ၀ကိုလည်း
✿ သစ္စာမရှိ မေတ္တာမဲ့တဲ့ သူတွေကိုမှ သံယောဇဉ်ဖြစ်တတ်တဲ့ ငါ့ကိုယ်ငါလည်း
✿ """"" မုန်းတယ် """"" """"" မုန်းတယ် """""
အားလုံးကိုရော ငါဆိုတဲ့ ငါကိုရော အဆုံးစ မရှိအောင်ကို """"" မုန်းတယ် """""
♥♥ရေးသားချိန်♥♥ 9:23 PM2comments: ♥♥ရေးသူ♥♥ အောင်ကျော်မြင့်
❤ အထီးကျန်မှုရဲ့ ပုဒ်စာ ❤
✿ ချစ်ခဲ့မိသမျှ သူတွေက
ငါ့ကို မုန်းသွားတတ်ကြမြဲ ~~~ ----------------------------
✿ ခင်မင်မိသမျှ သူတွေက
ငါ့ကို ပြစ်ပယ်သွားတတ်ကြမြဲ ~~~
✿ တွေးမရအောင် ချာချာလည်လို့
ငါ့မှာ ဘာအပြစ်တွေများ ရှိနေလေရော့လဲဟင် ???
✿ ငယ်ငယ်က ငေးမောမှုတွေနဲ့
♥♥ရေးသားချိန်♥♥ 9:19 PM No comments: ♥♥ရေးသူ♥♥ အောင်ကျော်မြင့်
(ကောင်း လွန်းလို့ တင်ပေးလိုက်တာပါ ဖတ်ဖြစ်အောင် ဖတ်ပေးပါ။ ဖတ်ပြီးလျှင် လည်း တပါးသူများကိုပြန် Share ပေးပါ။ )
၁။ ဝင်ငွေမ ကောင်းတဲ့အခါချွေတာသုံးစွဲတာ အကောင်းဆုံးယတြာ။
၂။ လမ်းသွားတဲ့အခါကြီးမားတဲ့ဝီရိယ ထားခြင်းဟာ အန္တရာယ် ကင်းဖို့ အတွက်အကောင်းဆုံးယတြာ။
၃။ ရန်လိုနေတဲ့လူနဲ့ဖက်ပြိုင်ပြီးမငြင်းတာ အကောင်းဆုံးယတြာ။
၄။ ဒေါသထွက်စရာ ကြုံတဲ့အခါစိတ်ဖြေသာတဲ့နေရာကို
ရှောင် ထွက်သွား ခြင်းဟာအကောင်းဆုံးယတြာ။
၅။ မနာလိုဝန်တိုစိတ်ကိုမမွေးအောင်ကံ ကံရဲ့အကျိုးကိုလက်ခံ
♥♥ရေးသားချိန်♥♥ 10:46 PM No comments: ♥♥ရေးသူ♥♥ အောင်ကျော်မြင့်
မိန်းကလေးများ ရည်းစားမရှိခြင်း၏ ကောင်းကျိုး ၁၂ ချက် --
၂။ အိမ်၏ ထေ့ငေါ့ပြောဆို ဆုံးမခြင်းမှလွတ်ကင်းခြင်း။
၃။ ဆေးလိပ်၊ဘီယာ ကဲ့သို့ သော အနံ့ဆိုးများမှ သက်သာခြင်း။
၄။ ဈေးဝယ်ထွက်ရာတွင် စိတ်ချမ်းသာစွာ သွားနိုင်ခြင်း( မပြီးသေးဘူးလား၊ကြာလိုက်တာ… စသဖြင့် ညူစူမှုများမှ ကင်းဝေးသဖြင့်..)
၅။ ညီမ ၊မောင်များအား လာဘ်ထိုးရသက်သာသဖြင့် မုန့်ဖိုးလောက်ငှခြင်း။
၆။ ချိန်းထားသောအချိန်နောက်ကျသဖြင့် အပြောအဆိုခံရခြင်းမှ ကင်းဝေးခြင်း။
၇။ လက်ဖက်ရည်ဆိုင်၊ ဂိမ်းဆိုင် ၊ အင်တာနက်ဆိုင်၊
♥♥ရေးသားချိန်♥♥ 10:39 PM No comments: ♥♥ရေးသူ♥♥ အောင်ကျော်မြင့်
ကမ္ဘာ့တန်ဖိုးအကြီးဆုံး အမျိုးသမီးစီး ဖိနပ်များ
အမျိုးသမီးများ၏ ဖက်ရှင်အမျိုးမျိုး ပြောင်းလဲဆန်း သစ်လာမှုတွင် ဖိနပ်များ၏ အခန်းကဏ္ဍကလည်း အဓိက နေရာမှ ပါဝင်ခဲ့သည်။
ဖက်ရှင်ရေ စီးကြောင်း ခေတ်အဆက် ဆက် ဖြတ်သန်းလာမှုတွင် အမျိုးသမီးစီး ဖိနပ်များကို ဒီဇိုင်းအမျိုးမျိုး၊ ပါဝင်ပစ္စည်း အမျိုးမျိုးဖြင့် ဖန်တီးချုပ်လုပ်လာခဲ့ကြသည်။
ကြွယ်ဝချမ်းသာသည့် အမျိုးသမီးများ၊ နာမည်ကျော် Celebrityများကမူ အဖိုးထိုက် ရတနာပစ္စည်းများ
ခေတ်သစ် လူနေမှု အဖွဲ့အစည်းတွင် မိုဘိုင်းဖုန်းများသည် လူတိုင်းအတွက် မရှိမဖြစ်လောက်အောင် လိုအပ်သော ပစ္စည်းများ ဖြစ်လာသည်။
ခလုတ်များနှိပ်၍ အသုံးပြုရသည့် ခေတ်ဦးမိုဘိုင်းဖုန်းများမှ ယနေ့ခေတ် Touchscreen စမတ်ဖုန်းများထိ နည်းပညာပိုင်း အဆင့်ဆင့် တိုးတက်လာသလို မိုဘိုင်းဖုန်းများ၏ အသုံးတွင်ကျယ်မှုသည်လည်း
♥♥ရေးသားချိန်♥♥ 8:32 AM No comments: ♥♥ရေးသူ♥♥ အောင်ကျော်မြင့်
အမျိုးစား: Phone သုတ
❤ မချစ်ပါနဲ့လား ❤
✿ အချစ်ဆိုတဲ့ အရာက
ငါ့ရင်ထဲကို ၀င်ရောက်လာခဲ့တယ် ...
ချစ်တတ်တဲ့ ဒီရင် တစ်ခုလုံးကို နာကျင်စေခဲ့တယ် ...
★ လေနှင်ရာ လွင့်ရဦးမယ့် ဘ၀မို့
♥♥ရေးသားချိန်♥♥ 11:21 PM No comments: ♥♥ရေးသူ♥♥ အောင်ကျော်မြင့်
တကယ်လွယ်ပြီးတော့ တကယ်လည်း ကောင်းပါတယ်။ အသုံးပြုပြီးချိန်မှာ မျက်နှာတွင် သိသိသာသာ ဖြူဝင်းသွားစေမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
♥♥ရေးသားချိန်♥♥ 8:16 AM No comments: ♥♥ရေးသူ♥♥ အောင်ကျော်မြင့်
အမျိုးစား: ပျိုမေတို့ လှပဖို့
♥♥ရေးသားချိန်♥♥ 10:57 PM No comments: ♥♥ရေးသူ♥♥ အောင်ကျော်မြင့်
တွေ့ ခဲ့တာပါ။ အဲဒီသင်္ချိုင်းဟာ လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ်ပေါင်း ၃၃ဝဝ ပတ်ဝန်းကျင်ထက် စောတဲ့ ကာလလောက်က ရှိခဲ့တာလို့
♥♥ရေးသားချိန်♥♥ 8:46 AM No comments: ♥♥ရေးသူ♥♥ အောင်ကျော်မြင့်
ကမ္ဘာ့ဈေးအကြီးဆုံး အစားအသောက် ၁၀ မျိုး
ငွေအများကြီးရှိပြီး မည်သည့်နေရာတွင် သုံးရမှန်းမသိ ဖြစ်နေပါသလား။ အောက်တွင်ဖော်ပြထားသော အစားအသောက်များက သင်၏ သိလိုစိတ်ကို နှိုးဆွပြီး စားချင်စိတ်ဖြစ်ပေါ်လာမည်လား ကြည့်လိုက်ပါ။
(၁၀) မက်တိတ် (သို့မဟုတ်) မက်ဆူကီမှို ဒေါ်လာ ၁,၀၀၀
မက်တိတ် (သို့မဟုတ်) မက်ဆူကီမှိုများမှာ အလွန်ရှားပါးသောကြောင့် ယနေ့ခေတ် ကမ္ဘာပေါ်တွင် ဈေးအကြီးဆုံးမှိုများဖြစ်သည်။ ယင်းမှိုများကို အာရှတိုက်၊ မြောက်အမေရိကတိုက်နှင့် ဥရောပတွင် တွေ့ရလေ့ရှိပြီး အထူးသဖြင့် ဂျပန်၊ တရုတ်၊ ကိုရီးယား၊ အမေရိကန်၊
♥♥ရေးသားချိန်♥♥ 8:37 AM No comments: ♥♥ရေးသူ♥♥ အောင်ကျော်မြင့်
အမျိုးသားများ ၀တ်ရန် သီးသန့် ဘရာစီယာ ထုတ်လုပ်၊ ၀တ်ဆင်ရတာ အရသာ အလွန်ကောင်းကြောင်းဆို
ဂျပန် ကုမ္ပဏီ တစ်ခု ဟာ အမျိုး သား တွေဝတ်ဆင် ဖို့ ဘရာ စီယာ နဲ့ အ တွင်း ခံ ဘောင်း
ဘီ တွေ သီးသန့် ထုတ် လုပ် လိုက် တာမို့အငြင်းပွား ဖွယ် ရာဖြစ်ခဲ့ ကြောင်း သိရပါ တယ်။ အမျိုး သား
♥♥ရေးသားချိန်♥♥ 8:45 PM No comments: ♥♥ရေးသူ♥♥ ကိုဦး
“ဧပြီ”လမှာမွေးခဲ့တဲ့ သူမ..၊ ဝိုင်းစက်သော မျက်လုံး..၊ ဝါဝင်းသော အသားရောင်ပိုင်ရှင်၊ သွယ်လျှသောခန္ဓာ၊
♥♥ရေးသားချိန်♥♥ 5:43 AM No comments: ♥♥ရေးသူ♥♥ အောင်ကျော်မြင့်
နှလုံးသားလေးက အသစ် ရင်ခုန်သံဖြစ်တည်စမို့
ရင်ထဲက အချစ်ကို မချွေတာ
အတွေ့အကြုံအသစ်မို့ မင်းပေးတဲ့ အချစ်ကို
အစစ်လို့ ထင်မိတာ ကိုယ်အပြစ်လားကွယ်...........
ငါဆိုတာလည်းလေ တစစီ ပြိုကွဲနိုင်မှန်းသိလျှက်
တိမ်လွှာတို့ရဲ့ သတ္တိနဲ့ မုန်တိုင်းကိုဝင်တိုးမိသလို
အကြောက်တရားတွေကင်း နှလုံးသားကို ချနင်းလို့
အချစ်ဆိုတဲ့ကစားပွဲ ၀ှက်ဖဲတစ်ချက် ထားတတ်မြဲတဲ့
♥♥ရေးသားချိန်♥♥ 8:44 PM No comments: ♥♥ရေးသူ♥♥ အောင်ကျော်မြင့်
၁၃၅၀ ခုနှစ်ခန့်က ဖြစ်ပါသည်။ ယ္ခုရန်ကုန်တိုင်း ရွှေပြည်သာမြို့(၆) ၁၃ ရပ်ကွက်မှ ဒေါ်တင်တစ်ယောက် -----မြို့ ဆေးရုံကြီး၏ အရေးပေါ်ခန်း တွင်ရောက်လျက် ရှိသည်၊ ရောဂါက အမျိုးသမီးများတွင် အဖြစ်များသော သားအိမ်ထဲ အကျိတ်အလုံး တည်ခြင်း၊ ရောဂါတစ်ခုပင်။
စိုးရိမ်ရသည့်အတွက် အမြန်ခွဲစိတ်ရမည်ဟု ဆိုကာအရေးပေါ်အခန်းထဲ ထည့်ထားခြင်းပင်။ တစ်ခုခက်နေသည်မှာ ဒေါ်တင်မှာရှိနေသော သွေးတိုးရောဂါပင်။
♥♥ရေးသားချိန်♥♥ 7:19 AM No comments: ♥♥ရေးသူ♥♥ အောင်ကျော်မြင့်
အရမ်းကောင်းတဲ့ပုံပြင်လေးပါ (အချိန် ၃ မိနစ်လောက်ပေးပြီဖတ်စေချင်ပါတယ်)
ကောင်လေးနဲ့ကောင်မလေး အချစ်စုံတွဲ ရှိခဲ့ကြတယ်။
တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် ချစ်ကြိုက်လာကြတာသက်တမ်းသုံးနှစ်ပြည့်တဲ့အခါ လက်ထပ်ကြတော့မယ်ဆိုပြီး မင်္ဂလာရက်တစ်ရက်ရွေးချယ်သတ်မှတ်လိုက်တယ်။
ကောင်းလေး ကတော့ ပျော်ရွှင်စရာကောင်းမယ့်သူတို့ရဲ့မင်္ဂလာရက်လေးကိုစိတ်ကူးယဉ်ပြီးပျော်နေရှာတာပေါ့။
ဒါပေမယ့် အဲ့ဒီမင်္ဂလာဆောင်မယ့်နေ့မရာက်ခင်မှာပဲ သူ့ချစ်သူကောင်မလေးက
♥♥ရေးသားချိန်♥♥ 10:28 PM No comments: ♥♥ရေးသူ♥♥ အောင်ကျော်မြင့်
"မခင်နွဲ့နှောင်း၊ ခဏ လာပါအုံး"
"ဟုတ်ကဲ့ လာပါပြီ ဆရာ"
"ညည်း မနေ့က သွားဆရာဝန်နဲ့ တွေ့ဖို့ရှိတယ်ဆိုပြီး နေ့ဝက်ခွင့်ယူသွားတယ် မဟုတ်လား"
♥♥ရေးသားချိန်♥♥ 9:02 AM No comments: ♥♥ရေးသူ♥♥ အောင်ကျော်မြင့်
ပုလဲလေးတွေ စီသလိုသွားလေးတွေဖွေးသန့်ဖို့ဈေးကြီး တဲ့သွားတိုက်ဆေးတွေ ၀ယ်မ သုံးနိုင်ရင် ၀မ်းမနည်းပါနဲ့ ။ သံပုရာ
♥♥ရေးသားချိန်♥♥ 8:56 AM No comments: ♥♥ရေးသူ♥♥ အောင်ကျော်မြင့်
Hancock Movie မကြည့်ရသေးသော သူငယ်ချင်းများ
အတွက်ပါ။ လုံးဝ လန်းတယ်ဗျာ။
ကျနော်အရမ်းကြိုက်တဲ့ ဇာတ်ကားလေးပါ Super Man ထက်သာတဲ့
စွမ်းအားတွေပိုင်ဆိုင် ထားတဲ့ Hancock ဇာတ်ကောင်က အတောင်ပံတောင်မလို
ဘူးဗျာ။ ပျံတာတွေကော ဟီးးးကြည့်လို့ကို မရိုးဘူးဗျာ။
တစ်ကယ်မိုက်တယ်နော်..ရထားတစ်စီးလောက်တောင် အသာလေး မပြတာဗျာ ..
♥♥ရေးသားချိန်♥♥ 8:50 AM No comments: ♥♥ရေးသူ♥♥ အောင်ကျော်မြင့်
အမျိုးသမီးတိုင်း အလိုချင်ဆုံးအရာက ဘာလဲ ?
“လောကကြီးမှာရှိတဲ့ အမျိုးသမီးတိုင်း အလိုချင်ဆုံးအရာက ဘာလဲ “ အဲဒီမေးခွန်းကတော့ ဘုရင်းလေးနဲ့ ပညာရှိအမတ်တွေကို
♥♥ရေးသားချိန်♥♥ 8:44 AM No comments: ♥♥ရေးသူ♥♥ အောင်ကျော်မြင့်
frozen full movie 2013 (မြန်မာစာတန်းထိုး)
ရရှိခဲ့ တဲ့ ဇာတ်ကားလေးပါ..။
နာမည်ကြီး ဇာတ်ကားမို့ ထက်ညွန်းမနေတော့ပါဘူး..။
♥♥ရေးသားချိန်♥♥ 11:06 PM No comments: ♥♥ရေးသူ♥♥ အောင်ကျော်မြင့်
ဒီစာလေး ဖတ်ပေးပါအုံး၊ သိပ်ကောင်းတဲ့ စာလေးပါ၊ သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်ဆီကရတာပါ၊ ဒီစာလေးဖတ်ပြီး ဒဏ်ရာတွေများရှိနေလို့ ပျောက်ခဲ့မယ်ဆိုရင်………
ဒီစာလေးကိုကျေးဇူးပြုပြီး ဆုံးအောင်ဖတ်ပေးပါ…. ဟိုရှေးရှေးတုန်းက အင်မတန် မှ စိတ်တို၊ စိတ်ဆတ်တဲ့ ကောင်လေး တစ်ယောက်ရှိသတဲ့။ တစ်နေ့ကျတော့ သူ့အဖေက ကောင်လေးကို အိမ်ရိုက်သံတစ်ထုပ် ပေးလိုက်ပြီး ပြောပါတော့တယ်။ မင်းတစ်ခါ စိတ်တိုတိုင်း သံတစ်ချောင်းကိုနောက်ဖေး
♥♥ရေးသားချိန်♥♥ 8:01 AM No comments: ♥♥ရေးသူ♥♥ အောင်ကျော်မြင့်
✿ ရှာရန် ✿
✿ ပိုစ့်တွေ mail ကဖတ်ရအောင် ✿
“ ❤ ဒီ blog လေးကို နှစ်သက်တယ်ဆိုရင်facebook like လေးလုပ်ပေးဖို့ မေတ္တာရပ်ခံပါတယ်နော် ❤ ”
✿ ဘလော့ခေါင်းစဉ်များ ✿
Facebook ဆိုင်ရာ (21)
Flash Songs (2)
Phone သုတ (16)
Website လမ်းညွှန် (20)
ပျိုမေတို့ လှပဖို့ (4)
✿ ရည်ရွယ်ချက် ✿
ကျွန်တော်ဘလော့ကို တည်ထောင်ရတဲ့ ရည်ရွယ်ချက်က မသိသေးတဲ့သူတွေနဲ့ ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်း လေ့လာဖို့အတွက်ပါ။ ဒီပို့စ်လေးတွေက ကျွန်တော်လေ့လာဖတ်ရှုတဲ့ စာအုပ်တွေ ဆိုဒ်တွေကကူးယူထားတာပါ. ဒီဘလော့လေးက ကျနော့်အတွက် မှတ်စုစာအုပ်လေးပါပဲ..လာလည်တဲ့အတွက် အထူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်..
❤ လူကြိုက်များသော ဘလော့များ ❤
Facebook မှာ စာလုံးပုံစံဒီင်္ဇိုင်းအဆန်းတွေနှင့်ရေးချင်ရင်
ပရိတ် နှင့် ပရိတ်ရွတ်ဖတ်ခြင်း သဘောတရားများ
အိပ်မက်၊ အတိတ်နိမိတ်နှင့် ဗေဒင်ပညာဆိုင်ရာ စာအုပ်များ (၁၁ အုပ်)
မိန်းမကောင်းအင်္ဂါ၆၄ ရပ်
“ ❤ သူငယ်ချင်းတို့ ဆိုဒ်တွေကို ဒီမှာ link ချိတ်စေချင်တယ်ဆိုရင် cbox မှာ ဆိုဒ် link လေးတွေ ထားခဲ့နိုင်ပါတယ် ❤ ”
✿ တစ်ခုခုပြောခဲ့ပါနော် ✿
✿ လာလည်နေကြသူများ ✿
✿ ဘာသာရေးဆိုင်ရာ ✿
✿ သတင်းနှင့်ဂျာနယ် ✿
မြန်မာနိုင်ငံမှ လူကြိုက်အများဆုံး ဆိုဒ်များ
Myanmar Express (မြန်မာသတင်းစုံ)
✿ အလုပ်အကိုင်ရှာဖွေရေး website များ ✿
✿ နည်းပညာ ✿
✿ Naing Wedside များ ✿
✿ အားကစား ✿
အမှတ်ပေးဇယား(league tabel )
✿ စာအုပ်စင်များ ✿
✿ Video Link များ ✿
✿ သီချင်းဆိုင်ရာ ✿
မြန်မာMp4 သီချင်းများ ရှာဖွေရာ
နေကမ္ဘာ မြန်မာ Mp3 သီချင်းများ
သစ္စာရပ်ဝန်း flash Song စုစည်းမှု
Flash Song စုစည်းမှု(၂)
ချင်းလေး Myanmar flash Songs
Youtube မြန်မာ သီချင်းများ
✿ အခြား ✿
Blog ကို Face book Like လုပ်ရန်
gtalk accounts book
✿ လိုတာယူသွားဖို့ပါနော် ✿
✿ တင်ပြီးသမျှ Post များ ✿